Karazana bisikileta inona no mety amiko? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Karazana bisikileta inona no tokony hahazoako quiz - boky torolalana feno
Karazana bisikileta inona no tokony hahazoako quiz - boky torolalana feno
Karazana bisikileta inona no mety amiko?
Raha mijanona amin'ny arabe ianao ary mitaingina fanatanjahan-tena indrindra, lalanabisikiletana fanatanjahan-tenabisikiletadia atsarasafidy. Fampiononana na sambo fitsangantsangananabisikileta no tsara kokoaho an'ny fohy, tsy fitondra-mandeha mitaingina miaraka amin'ny ankohonana. Raha ianaobisikiletamatetika ho an'ny fivezivezena, tanàna iraybisikiletamety hotsara indrindra; eritrereto ny maodely manampy pedal elektrika ihany koa.
Inona ny bisikileta tsara indrindra vidiana? Um. Segondra iray monja, raha ny marina. (Hira upbeat) Mazava ho azy fa ity fanontaniana ity dia tena sarotra valiana, tsy hoe satria sarotra ny mitady bisikileta tsara, fa raha ny tena izy satria miankina aminao indrindra ilay bisikileta ilay bisikileta.
Raha tokony hanontany ny atao hoe bisikileta tsara indrindra isika dia tokony hanontany hoe ahoana no hividiananao ny bisikileta tsara indrindra ho anao? Ny teboka voalohany amin'ny fividianana ny bisikiletanao tsara indrindra dia ny teboka voalohany ahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny ilainao izany. Andao hifantoka amin'ny bara mitete eto isika izao. Raha te-hihoatra ny làlana ianao, dia eritrereto ny mividy bisikileta an-tendrombohitra.
Ankehitriny ny bisikileta cyclocross na bisikileta gravel toy ireny dia tena mahavariana sy mahafinaritra be eny an-dalana raha mbola milamina. Raha ny tena izy, ny familiana eny ivelan'ny arabe voasazy adrenalinina, na izany aza, ny kodiarana matavy amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia mahafinaritra fotsiny. Tsy dia mora tohina ianao ary misy vato sy fotony, noho izany dia mitondra fiara milamina kokoa ianao, mitondra fiara haingana ary koa li. dia kely hahazoana kodiarana fisaka.
Ary avy eo ahoana ireo bisikileta gravel na cyclocross? Toy ny bisikileta amin'ny hazakazaka ihany izy ireo amin'ny ankapobeny, na dia somary miadana aza izahay, vao haingana no nosedrainay ary hitanay fa roa kilometatra ny halavany dia iray miadana kokoa noho ny bisikileta ity. Eny, mety ho zava-dehibe aminao izany na tsia, saingy zava-misy izany. Ka raha te hihazakazaka eny amin'ny arabe ianao dia mila mividy bisikileta amin'ny hazakazaka.
Ho an'ny zavatra hafa rehetra, ity bisikileta ity dia mety ho tonga lafatra. Azonao atao fotsiny ny mamihina ireo kodiarana lehibe kokoa, mandehandeha mizaha, mitaingina arabe mangalatra izay tsy ho voakasikao amin'ny tsato-by, amin'ny bisikileta toa izao. Izy ireo koa dia tena mafy orina, ka afaka mitondra fiara am-pifaliana isan'andro ianao mandritra ny ririnina miaraka amina seza zaza mifikitra ao an-damosinao.
Tena soavaly fiasa io. Raha heverina fa tsy maro amintsika no tena mihazakazaka, misy dikany ve ny mividy bisikileta amin'ny hazakazaka? “Eny eny, azo antoka fa misy teboka iray amin'ny fividianana bisikileta amin'ny arabe. Haingam-pandeha izy ireo, izay midika koa fa mora kokoa ny manohy y na dia ny kitaponao aza.
Mamaly kokoa izy ireo, velona kokoa izy ireo, mihanika tsaratsara kokoa, afaka midina ambany kokoa izy ireo, afaka milamina tsara. Fiara fanatanjahan-tena kely io, fa ho an'ny vidin'ny a. Ary raha ny tena izy dia bisikileta amin'ny hazakazaka maro no tsara lavitra noho ny mitaingina vatokely noho ny noeritreretinao azy.
Ny teboka manan-danja manaraka, na ny voalohany aza tsy afaka nanapa-kevitra izahay, dia ny tena mety, manan-danja tokoa amin'ny fitadiavana ny bisikileta tsara indrindra ho anao. Tsy mila mampiasa vola amin'ny fametahana bisikileta matihanina intsony ianao izao. Raha mividy amin'ny fivarotana malaza ianao dia tokony ho afaka hanampy anao hahita ny habeny mety. marina izany, mifantoka amin'ny haavon'ny lasely.
Tena mora ny manitsy azy io. Ka ny zavatra misy fiatraikany bebe kokoa amin'ny atao hoe bisikileta mety dia ny tratry ny tetsy sy ny hahavony. Ka raha manana toerana fohy na avo ianao dia azo inoana fa mila mividy bisikileta afaka manome anao izany.
Ka bisikilety am-piaretana karazana, fa raha tianao ny toerana lava kokoa sy mihinjitra kokoa, dia mety hahita bisikileta miaritra ianao tsy mahazo aina. Noho izany dia mila misafidy bisikileta nentim-paharazana, maivana, na endrika zana-tsipìka ianao. Taloha, maivana dia ny rehetra ary mifarana rehefa mividy bisikileta.
Ny bisikileta maivana kokoa dia haingana kokoa. Na, raha ny marina, dia mandra-pahatongan'ny bisikileta aerodynamika izy ireo, ary ara-teknika haingana kokoa izy ireo amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra mitaingina rehetra. Saingy lafo ihany koa izy ireo, koa ny fitazonana ny vidiny kely kokoa aza dia tokony ho iray amin'ireo heverinao fa lehibe.
Araka ny nolazaiko, ny bisikileta maivana kokoa dia haingana kokoa ary mahazaka olona kokoa, ary mahomby koa izy ireo. (mozika faly) Misy safidy efatra. Fibre vy, titanium, aluminium ary carbon.
Na iza na iza dia azo aorina anaty bisikileta tsara, ary samy hanana ny mpanohana azy ny tsirairay. Miaraka amin'ny teti-bola ambany, ny lanjan'ny frameset no mety ho zava-dehibe aminao. Ka ny vy mora vidy dia mavesatra be, fa tena henjana sy mafy orina tokoa; maivana kokoa ny aluminium, ary avy eo ny fibre karbaona dia maivana kokoa amin'ny ankapobeny.
Raha maro ny mpitaingin-tsoavaly manandrana manao ny fitsambikinana amin'ny vatan'ny fibre karbonika araka izay tratra, dia mazàna aho mihevitra fa ny bisikileta vita amin'ny aliminioma ho an'ny vidiny mitovy dia matetika no safidy tsara kokoa, ary betsaka amin'izany ny vokatry ny fizaran-tany. Fiaramanidina lafo vidy kokoa dia mirindra hiasa tsara kokoa sy milamina kokoa, hatrany amin'ny 1.000 euro, dolara, marika farantsakely ho an'ny bisikileta. Ary aorian'izany dia mihamazava fotsiny izy ireo, ankoatr'izany, ny fitaovana elektronika izay mandeha tsara kokoa.
Miala tsiny ry zareo. Ankehitriny ny isan'ny lakile dia tsy tokony ho olana lehibe loatra. Afa-tsy ny fitaovana kely kokoa any aoriana dia mety hidika ho fahombiazana kely kokoa sy lanjany kely kokoa.
Ny kodiarana sy ny kodiarana dia mety hisy fiatraikany na hanimba ny kalitaon'ny dia. Ka ny maivana sy maivana dia mety hisy fiovana eo amin'ny bisikiletanao. Ka isaky ny mividy vaovao ianao dia aza hadino ny mijery an'izay voalaza ao, ary mety hanao sorona amin'ny toeran-kafa amin'ny bisikileta hahazoana kodiarana madio, inona no hitranga raha mividy ilay bisikileta ianao tonga miaraka amin'ny lasely izay tsy tianao, na miaraka amina tadivavarana sy tadiny? Ovainao izy ireo.
Ity no apetrakao amin'ny teti-bola kely kokoa, angamba ny fividianana andiana pedal tsy misy clip na mividy tsangambato misy endrika hafa izay tianao kokoa dia mety hitondra fiovana lehibe amin'ny bisikileta. Ka miezaha tsy ho entin'ny ekipa iray na roa amin'izay mety ho bisikileta tsara indrindra ho anao. Tsy latsa-danja indrindra, ny fijery ny bisikiletanao, ny hatsarany.
bisikileta komuter mora vidy
Eny, heveriko fa mety mendrika ho avo kokoa amin'ny lisitray izy ireo, na dia tsy toa ny fomba misaina indrindra hisafidianana bisikileta aza raha tena tianao ny fijery bisikileta rehefa mampitempo haingana kokoa ny fonao isaky ny mahita ianao izy, bisikileta tsara be izany eo imasoko ary azonao atao ny mamela azy noho ny lesoka rehetra raha hitanao isaky ny mahita azy ianao dia te-handeha bisikileta. Bisikileta mahafinaritra io. Ary ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany dia ampahafantaro anay izay heverinao fa bisikileta tsara indrindra ho anao, nahoana ary inona no tena izy? Avy eo misoratra anarana amin'ny GCN koa.
Mba hanaovana izany, tsindrio fotsiny eto ambonin'ny tany. Raha mitady atiny misimisy kokoa izay afaka manampy anao hanapa-kevitra ny atao hoe bisikileta tsara indrindra izahay, dia misy lahatsoratra tsara eto dia ny Endurance Bike vs Arrow Bike vs Lightweight Bike. Na, miaraka amin'ity cyclocross manontolo vs.
Ny tsingerina iza no tsara indrindra ho an'ny vao manomboka?
Ny 12Ny bisikileta vao manombokaHanomboka mitaingina izao
Tsara indrindraTanànaBisikiletaCo-op City 1.1.
Tsara indrindraTendrombohitra KidsBisikiletaMpiara-miasa Apok 20.
Tsara indrindraMila mahay mandanjalanjaBisikiletaStrider Classic.
Tsara indrindraVehivavy Hybrid Cannondale Quick CX 3.
Tsara indrindraDiso haingana 5 ho an'ny lehilahy Hybrid Cannondale.
Tsara indrindraCity Electric Aventon Pace 350.
Tsara indrindraCruiser Electra Lux Kalau.
Tsara indrindraTownie Electra 7D.
Nanapa-kevitra ny hividy ny bisikiletanao voalohany ianao, nahagaga fa nandray ny dingana voalohany ho any amin'ny tontolo lehibe kokoa ianao, fa ny mividy ny bisikiletanao voalohany dia mety hahatsapa ho somary manahirana sy manjavozavo satria toa karazany maro samy hafa vita amin'ny fitaovana samihafa misy singa samihafa izy ireo. mandalo, noho izany dia ato amin'ity lahatsoratra ity isika. Homeko torolàlana azo ampiharina ianao ary holazaiko aminao izay tena tadiavina sy inona ny fahasamihafana. Tena liana amin'ny bisikileta aho, ka na inona na inona mahatonga ny olona betsaka kokoa amin'ny bisikileta ary mizara izay maniry bebe kokoa.
Izany no nahatonga anay hiara-hiasa amin'i Decathlon, manana bisikileta feno izy ireo miaraka amina endri-javatra maro samihafa ary sarobidy koa izy ireo amin'ny vola, midika izany fa ity no toerana mety indrindra hanehoako anao izay rehetra tadiavinao ary ilaiko koa papango kitesurf vaovao miampy eritreritra mamono vorona roa amin'ny vato iray. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mamaritra hoe ohatrinona ny vola tianao holaniana, fa ohatrinona ny vola tokony holaninao tsara tsy misy valiny mety Mba hamaliana izany fanontaniana izany, na izany aza, rehefa mividy bisikileta an-dàlana dia azonao atao ny mahafantatra fa ny bisikileta avo lenta fidirana avo lenta matetika dia manomboka amin'ny 260 Oro na £ 250, tahaka ity iray ity, ary avy eo rehefa mahazo vola bebe kokoa ianao, mazàna maivana sy mavesatra kokoa ireo zana-kazo ary maivana kokoa sy matotra kokoa ireo singa ao amin'ireo zana-kazo ireo ho an'ny 600 euro eo ho eo dia afaka mahazo vola atahorana bisikileta betsaka ianao, zavatra mazàna kokoa miaraka amina alim-baravarana alim-baravarana misy singa tsara amin'ny fidirana noho ny mety ho frein disc sy bisikileta miaraka amin'ity karazana fitaovana ity aza mahomby tokoa, azoko antoka fa fantatrao izany. Tendrombohitra na Alpes angamba ianao ary manao hazakazaka roa amin'ny bisikileta miaraka amin'itony karazam-pahazavana fantatro izao satria misy ny zavatra rehetra nataoko tamin'ny bisikiletako voalohany dia nanoro hevitra anao aho tsy handany ny volanao amin'ny fandaniana bisikileta irery, izany dia tsara amin'ny teti-bola ho an'ny kojakoja ilaina rehetra toy ny kiraro sy ny pedal, ny akanjo sy izay rehetra ilainao, izao dia jereo tsara ny antsipiriany vitsivitsy rehefa misafidy ny bisikiletanao, ny singa mifatotra amin'izany dia avy amin'ny teny iraisana ho an'ny frein sy ny circuit no vondrona izao misy mpamokatra isan-karazany ao amin'ny vondrona Campagnolo, microchip SRAM ary angamba ny shimano malaza indrindra, na inona na inona ny vondrona misy ny marika dia miakatra amina ambaratongam-pahefana na ambaratonga maro, raha miakatra ny ambaratongan'ny vondrona dia lafo kokoa izy ireo ary ireo singa mahazo maivana kokoa maivana kokoa mazàna izy ireo mazàna no mahazo fitaovana bebe kokoa namboarina avy amin'ny fitaovana exotic kokoa ary Ary ho tsara kokoa koa izao ny miovaova, ny bisikileta haingam-pandeha sy ny bisikileta hazakazaka s matetika omena vondrona vondrona izay ambany amin'ny ambaratongam-pahefana, ohatra tsara dia Shimano Sora, izay vondrona Shimano ambaratonga faharoa ary matetika ampiasaina amin'ny bisikileta manodidina ny 500 Pound vidiny no hita Shimano Sora afaka miakatra ao amin'ny ambaratongan'ny vondrona ny bisikiletany dia nanana an'i Shimano ary nosoratako an-tendrombohitra tao amiko na i Carall momba ny toerana nitaingenako hazakazaka miaraka aminy fa ny iray amin'ireo zavatra ho fantatrao momba ny fampitahana an'ireo vondrona ireo dia ity bisikileta ity dia manana Kasety 1132 ao aorina, izay atoroko ho an'ny bisikiletanao voalohany, ny anton'izany dia satria ilaina ho an'ny havoana io fitaovana 32 nify ao ambadiky ny kasety io.
Midika izany fa ny fihodinanan'ny tongotrao bebe kokoa dia afaka mahazo cadence ambonimbony kokoa ianao, ary vao mainka mahatonga ny havoana hitsambikina kokoa. Mifanohitra amin'ny bisikilety sasany izay miaraka amina kasety somary mafy kokoa io, ary 11:28 diniho ary ny rojo vy dia manana habe rojo isan-karazany koa ankehitriny, izay hatolotro ho an'ny bisikiletanao voalohany dia rojo vy mifatotra izay 50:34 no ananantsika eto ary noho io antony io ihany no anolorako ny taona 32, ny backit dia manamora ny havoana kely fotsiny raha vao manomboka ianao. Raha toa ka mpandeha bisikileta vao manomboka ianao ary te hanana fitaovana izay afaka manampy anao hianika havoana tadiavinao, ny frein lehibe kokoa any aoriana sy kely dia voalaza fa anisan'ny vondrona ihany koa ary amin'ny ankapobeny dia misy karazany roa ny freins Rim na araka ny ahitanao an'ity freins disc an'ny bisikileta ity ary ireo freins ireo dia kely lavitra noho ny frein rim fa ahoana kosa raha mipetraka ianao na mitaingina faritra be havoana? any amin'ny faritra be tendrombohitra dia ilazako fa mendrika ny ezaka fanampiny izy ireo satria manolotra freins mahery vaika kokoa, izay mifanaraka kokoa indrindra amin'ny toe-javatra mando ary amin'ny ankapobeny dia voafehiny tsara kokoa.
Tokony hamafisiko fa ny freins de rim nampiasain'izy ireo dia ampy tsara handresena ny Tour de France mandritra ny 100 taona ary manana tombony fa somary maivana kokoa noho ireny frein ireny, satria ny fitaovan'ny frame dia misy akony lehibe amin'ny kalitaon'ny fitaterana ankapobeny. ny bisikileta misy alim-borona mahazatra indrindra, alim-by ary karibonetra manodidina ny 250 ka hatramin'ny £ 1.000 na dolara, ny ankamaroan'ny bisikileta hitanao dia vita amin'ny alimo alimo ary tsara izany satria ny aliminioma dia fitaovana mora ampiasaina ary maivana t ny tahan'ny lanjany tsara, izany no antony ampiasana azy amin'ny fiaramanidina, mahazaka harafesina be koa izy io ary azo atao amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny fibre karbonika izay midika fa ny bisikileta dia mora kokoa noho ny arivo euro azonao atao ny manomboka mahita -bisikileta fibre karbonika toa ireto vanreisel edr 105 na hira Sang, araka ny voalazany eo aloha, izay misy antsika izao. Ny fibre karbaona mazàna dia maivana sy henjana kokoa noho ny aliminiôma ary ny fanaovana vy ho an'ny mitaingina kalitao tsara dia fitaovana lehibe hanaovana bisikileta fa raha tsy feno ny teti-bolanao dia tsy manahy ianao fa ny alim-by no voalohany fa ny alim-by kosa dia ny mampiavaka azy tsara. bisikileta misy alim-by vita amin'ny alim-bolan'ny Carbon ity dia mampihena ny lanjany, manamafy ny fork ary mampihena ny hovitrovitra eny an-dàlana ary ny fidradradradrana amin'ny alàlan'ny kitapom-baravarana mifidy marika fanta-daza dia izao no ahafantaranao fa ny endriny dia namboarina sy nosedraina tsara ary koa fiantohana marimaritra iraisana amin'ny kodiarana amin'ny kodiarana mendrika ny fijerena ny fanesorana ny kodiarana arakaraka ny tokony ho izy no holazaiko satria manome anao fahaiza-manao bebe kokoa izany. Azonao atao ny mifamatotra amin'ny kodiarana midadasika kokoa raha tianao, raha tianao ny lalana mania ary manao traikefa kely dia azonao atao ny manampy zavatra toy ny fiparitahan'ny fotaka, ny valizy ary ny kojakoja hafa maro hafa ary ny antsipiriany farany amin'ny sary dia ny fononteny ambany - ireo no bearings izay Ny rojom-by misy ny bisikileta rehetra misy fioritana ivelany misy kofehy anaty misy kofehy dia mahazo teboka bonus ao amin'ny bokiko satria ireo dia toa tsy mila fikojakojana firy ary maharitra ela kokoa.
Lazaiko aminao izao ny kodiarana Imean ho karazan-danja lehibe amin'ny bisikileta rehetra, ankehitriny dia mandeha ny bisikileta avo lenta amin'ny kodiarana fidirana satria io no singa malaza indrindra manatsarana ny ambany kokoa amin'ny bisikileta. Miditra bebe kokoa amin'ny fanatanjahantena izy ireo ary matetika mamadika azy ireo amin'ny zavatra maivana kokoa, henjana kokoa, ary angamba aerodynamika kokoa, saingy miaraka amin'ireo fiakarana fampivoarana ireo dia mampitombo ny vidiny ireo mpanafika ary mitazona izany d ambany ny vidiny, na mivoaka ny bisikileta fidirana miaraka amin'ny kodiarana tsotsotra kokoa, fa rehefa manombatombana ny kodiarana ianao dia tadiavin'ny bisikileta amin'ny soso-kevitro, misy nomerao setroka tena avo be satria io dia manampy ny kodiarana ho matanjaka kokoa sy ho matanjaka kokoa koa dia hanome soso-kevitra ny hijerena ny sakan'ny molony. Ny mety indrindra dia ny tadiavinao izay mety kokoa amin'ny kodiarana midadasika kokoa, noho izany ny sakany somary midadasika kokoa toa ny kodiarana 25mm na ny kodiarana 28mm dia manome fiononana kely kokoa, fangejana kely kokoa ary misy fanoherana kely mihodina ihany koa, izay midika fa afaka mitaingina mitovy ihany ianao hafainganam-pandeha miaraka amin'ny ezaka kely kokoa.
Ankehitriny dia homeko anao ny fampahalalana hafa haingana izay tokony ho fantatrao rehefa mividy ny bisikiletanao voalohany. Ny bisikileta an-dàlambe dia natao hampiasaina amin'ny pataloha fohy, izay midika fa ara-dalàna raha tsy mahazo aina izy ireo raha tsy misy pataloha fohy, ary ny fampiononana amin'ny lasely dia tena manokana koa, ka mahazatra ny fanovan'ny mpitaingina zavatra betsaka. Ny ankamaroan'ny bisikileta amin'ny hazakazaka dia tsy miaraka amina pedal, na dia misy ny bisikileta ambany aza miaraka amin'ny fampisehoana pedal fisaka.
Raha manana mitaingina lava ianao na manao fanatanjahan-tena EOB dia ampirisihinay hanavao ny pedal sy ny kiraro tsy misy clip satria mamela anao hidina sy hivezivezy amin'ny dia an-tongotra ianao mba hahomby kokoa aminao, afaka mahazo bisikileta manokana ho an'ny vehivavy koa ianao raha hanao izany dia hanana fefy mitovy nefa manana teboka fifandraisana samihafa handraisana ireo fahasamihafana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny lahy sy ny vavy, noho izany dia mahazo lasely lafiny manokana ianao izay somary fohy kokoa ny tahony sy ny kitapom-bolako ary ny lavaka kely fohy kokoa, saingy tsy ilaina mafy izany. Manentana anao izahay hisafidy izay mety indrindra aminao. Mety ho liana amin'ny bisikileta na vatolampy mifangaro ianao.
Ireo dia bisikileta an-dàlana miaraka amina fanovana vitsivitsy mba hahatonga azy ireo hahay bebe kokoa mba hanananao kodiarana kodiarana bebe kokoa, kodiarana lehibe kokoa izay afaka mandeha lavitra kokoa, fitaovana mora kokoa azonao jerena fa misy sprocket goavambe eo amin'ny kasety eto ary frein-tsofina ary Midika izany fa manana bisikileta amina làlana miaraka amina bara mitete izay haingana be eny an-dàlana noho ny bisikileta an-tendrombohitra ianao nefa koa afaka mitaingina fako na vatokely, izay tsy tianao hatao amin'ny bisikilety mahazatra dia tsara ho an'ny olona miaraka aminy. fiaviana mifangaro izay te-hanana traikefa nahafinaritra, angamba manangona bisikileta vitsivitsy, na angamba mpandeha iray tsy te hijanona eny an-dalana fotsiny. Azonao atao ihany koa ny mamadika ny kodiarana taloha ho an'ny roadones manify sy malama ary manana bisikileta an-dàlana ianao ary mpankafy maro an'ireny karazana bisikileta ireny aho, bisikileta graba an-tsokosoko dia manodidina ny dimy hetsy ariary na enin-jato euro. Ny andian-saka dia nanao asa nahitam-bokatra tamin'ny fahitana ny papako vaovao nefa zavatra hafa iray taonina koa saingy hadinoko tanteraka fa ilaiko ihany izany raha tianao ny tiako ity lahatsoratra ity ary hitako fa misy fanazavana ary azafady mba omeo anay sy tohiny Ary izao dia nanapa-kevitra ianao hoe bisikileta inona no tianao hanananay soa aman-tsara dia misy lahatsoratra momba an'io sy taonina misy atiny vao tena ilaina.
Hody aho izao ary hilalao ny kilalao
Inona no bisikileta isan'andro tsara indrindra?
Tsara indrindramifangarobisikileta komuter
Alibi natokana. 450 $.
Giant Escape 3. $ 420.
James Coda S3. 500 $.
Cycle madio Urban-Bisikileta komuter. 499 $.
Kona Dew. 700.
Kitapo mpiara-miasa CTY 1.1Bisikileta. $ 599.
Kitapo mpiara-miasa CTY 1.1 DinganaBisikileta. 600 $.
Disc Disc Crosstrail manokana. 670 $.
Hey ry zalahy! Miaraka amin'ny kalitaon'ny bisikileta an-tendrombohitra sy bisikilety, ny bisikileta hybrid no tsara indrindra amin'ny tontolo roa. Satria manome fahafaham-po ny fitakiana ny fepetra rehetra amin'ny fandehanana izy ireo, ny bisikileta hybrid dia azo ampiasaina amin'ny fitsangantsanganana manodidina ny tanàna na amin'ny lalana mikitoantoana sasany. Maromaro izy io, saingy maharitra ihany koa ny mahatratra ny faritra rehetra, noho izany dia hijery ireo dimy amin'ity lahatsoratra ity izahay no namorona an'ity lisitra ity miorina amin'ny hevitray, ny fikarohana ary ny hevitry ny mpanjifa.
Izahay dia nandinika ny kalitaony, ny endri-javatra ary ny lanjan'izy ireo amin'ny famerana ny safidy tsara indrindra. Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao ary havaozina Ho an'ny vidiny amin'ireo vokatra voalaza ireo dia aza hadino ny mijery ireo rohy ao amin'ilay boaty famaritana etsy ambany. Ireto ny bisikileta hybrid dimy tsara indrindra.
Ny vokatra fahadimy ao amin'ny lisitray dia ny Schwinn GTX. Ny Schwinn GTX dia bisikileta hybrid izay tsara amin'ny arabe samihafa. Izy io dia manana tontolon'ny fanatanjahantena roa misy aliminioma ary misy amina modely 3 samihafa ara-bakiteny, dia ny GTX1.0, GTX 2.0 ary GTX Elite.
Th Ity bisikileta firaka vita amin'ny aliminioma ity dia henjana be ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. Schwinn dia namolavola ity bisikileta ity tamin'ny alàlan'ny fikirakirana mamaly haingana sy haingana. Izy io dia manana kodiarana maharitra, izay mahafehy na dia ny dona kely indrindra aza amin'ny làlambe The Schwinn GTX koa dia manana rafitra fampiatoana eo amin'ny fork eo aloha izay mifoka vongan-tany ary miantoka fitsangantsanganana malama.
Ny Schwinn GTX dia manolotra fivezivezena milamina, na amin'ny fivezivezena na amin'ny làlana fotsiny. Fampiasana arabe. Ny Schwinn GTX dia miaraka amina frein pull ary misy fampiatoana henjana.
Misy freins mekanika eo aloha sy aoriana. Izy io koa dia manana shifter Shimano 21 hafainganam-pandeha sy Shimano aoriana derailleur. Ny mahatsara azy dia: * Eo amin'ny Mahay miatrika izay tanindrazana rehetra raha mbola tsy tafahoatra; * Tsara ho an'ny fivezivezena sy fanatanjahan-tena; ary * Mazava noho ny bisikileta an-tendrombohitra mahazatra.
Na izany aza, ny fatiantoka dia: * Ny seza dia mety tsy mahazo aina aorian'ny dia lavitra; ary * Tsy natao hampiasa tafahoatra ny lalana. Raha mitady bisikileta manome haingana sy mailaka amin'ny vidiny mirary ianao, dia mety aminao ny Schwinn GTX. Ny vokatra fahefatra ao amin'ny lisitray dia ny Schwinn Network.
Ny Schwinn Network no bisikileta mety indrindra amin'ny dia lavitra manodidina anao. Na eo aza ny lanjany maivana, ity bisikileta ity dia matanjaka tsara handraisana ireo mpitaingina lava. Na mandeha miasa na mandeha mitaingina fialamboly ianao, ity bisikileta hybrid ity dia manome dia mora sy malefaka ary milamina.
kiraro mifanaraka amin'ny crank brothers
Ity bisikileta ity dia manana shifter Shimano EZ Fire 21 hafainganam-pandeha natao ho an'ny fanitsiana haingana sy fanafainganana ampy. Natao hanomezana traikefa mitondra fiara tsara amin'ny làlana misava, ny làlan-kivoana ary na dia ny havoana kely aza, vita amin'ny aliminioma ny endriny, ny sisiny avo ary ny freins mitarika. Ny endriny marobe dia mamela ny mpamily hitondra azy moramora, manome azy ireo hetsika mavitrika sy mihetsika.
Ny Schwinn Network dia misy kodiarana 700c ary misy Shimano 21-Speed ​​Revo TwistShifter sy Shimano derailleur aoriana. Izy io koa dia miaraka amin'ny fork fampiatoana ho an'ny diany milamina. Ny tombony dia: * Azo zaka ny fotony.
Izy io dia mahazaka mpitaingina haavo samy hafa mandray; * Manamora ny fiakarana havoana; ary * Mazava noho ny bisikileta hafa amin'ity karazana ity. Ny fatiantoka kosa dia: * Ny tariby fantsona ambony dia mety ho manjavozavo amin'ny lalàm-by amin'ny fiara; ary * Tsy mahazaka zotram-piaramanidina lavitra. Miaraka amin'ny Schwinn Network dia afaka mankafy dia mahafinaritra sy mahomby ianao.
Môtô hybrid mety ho an'ny mitaingina ny manodidina, amin'ny làlan'ny bisikileta, na amin'ny fiverenanao maraina. Ny vokatra fahatelo ao amin'ny lisitray dia ny reezero fahenina Pave n 'Trail. Ny Pave n 'Trail dia manolotra fahaiza-manao sy fahaiza-manao.
Ity bisikileta ity dia manolotra mitaingina mampahazo aina satria miaraka amin'ny forona fandefasana Vibrazord Front Suspension sy kodiarana anti-slip 1,75 mirefy malalaka misy kofehy matanjaka. Hita amin'ny kinova 3 izy io: Network 1.5, Network 2 ary Network 3.0.
Na ho an'ny fialamboly na ho an'ny fialamboly, ity bisikileta ity dia ahafahanao mitaingina milamina sy milamina. Izy io koa dia feno amin'ny alim-pandeha haingam-pandeha 7 haingam-pandeha ho an'ny fihetsika haingana sy haingana. Ny Pave n 'Trail dia miaraka amin'ny forona fampiatoana eo anoloana Vibrazorb izay mampihena ny hovitrovitra sy ny fikororohana amin'ny tany tsy mitovy.
Ny kodiarany marevaka 1,75-inch dia mihodina milamina sy haingana eo amin'ny lampivato, raha toa kosa ny dian-tongony matanjaka dia misintona ny karatra avy amin'ny loto amin'ny lalana. Ity bisikileta hybrid ity koa dia manana shifter 21-hafainganam-pandeha Shimano.
Ny tombony dia: * Tsara ho an'ny fampiasana andavanandro toy ny fivezivezena sy ny fivezivezena; * Izy io dia mahazaka valizy an-tanana noho ny valiny aoriana; ary * Mora izany. Ny fatiantoka kosa dia: * Azo heverina ho malalaka ny kodiarany; ary * Ny fantsony ao anatiny indraindray mety diso. Ny Sixthreezero Pave n 'Trail dia mety raha mitady bisikileta milentika azonao aleha hiasa ianao, manao asa fivelomana, ary hijery ireo làlana eny ivelan'ny arabe mihitsy aza.
Ny vokatra faharoa ao amin'ny lisitray dia ny Schwinn Discover. Ny Schwinn Discover dia natao ho an'ny fitsangantsanganana an-tanety samihafa. Izy io dia miaraka amina rafitra aluminium sy rafitra crank aluminium azo ovaina.
Na dia tsy bisikileta an-tendrombohitra aza, ity bisikileta hybrid ity dia manaporofo fa matanjaka sy marin-toerana, mahavita manao asa isan-karazany amin'ny sehatry ny fihaonany. Ity bisikileta ity dia manolotra fiovana hafainganam-pandeha 21, ka mahatonga azy ho bisikileta mailaka azonao ampiasaina amin'ny arabe lehibe eny an-tanàna be be, na faritra mikitoantoana, na faritra malalaka sy misavoritaka. Ny Schwinn Discover dia manana fork fampiatoana izay mahazaka fivontosana sy tany be vato.
Tsy ilaina ny fahaiza-mitondra fiara rehefa mitaingina bisikilety hybrid ity satria mora ny mihetsika. Izy io dia manana shifter grama 21-hafainganam-pandeha SRAM, mpampisintona fihodinana firaka ary mpivezivezy eo amin'ny boaty Shimano aoriana derailleur d. Ny tombony dia: * Miaro ny mpamily amin'ny loto sy ny gorodona ny fenders; * Manome fandikan-teny maro karazana; * Ny tahony azo ovaina dia mahazaka mpitaingina habe rehetra; ary * Izy io dia afaka mitondra entana.
Na izany aza, ity bisikileta hybrid ity dia mavesatra be ihany. Raha mitady bisikileta afaka mamaly ny fitakian'ny terrains manahirana isan-karazany ianao, ny Schwinn Discover no bisikileta azonao ianteherana. Alohan'ny hanomezantsika ny laharana voalohany, zahao ny famaritana etsy ambany momba ny fifanarahana farany amin'ny tsirairay amin'ireto entana ireto, ary aza hadino ny misoratra anarana raha te-hiaraka amin'ny vokatra tsara indrindra eny an-tsena rahateo ianao. bisikileta dia iny EVRYjourney enimpolo iny.
Raha jerena voalohany, ny EVRYjourney enina amby enimpolo dia toa bisikilety tsotra, fa amin'ny fijerena akaiky dia bisikileta hybrid izay misy motera familiana kodiarana 250 watt ary manohana fomba roa: manampy ny pedal ary mandeha amin'ny herinaratra tanteraka. Eny an-dalana, ny bisikileta dia afaka mahatratra hafainganam-pandeha hatramin'ny 24 km / ora herinaratra tanteraka. Miaraka amin'ny fanampian'ny pedal dia mety hahatratra 48 km / ora izy, izay midika fa mandeha ny motera rehefa mandeha môtô.
Ao amin'ny seza any aoriana dia ahitanao batterie 250 watt natao hametrahana ny b Mandrakizay 15 kilometatra amin'ny vidiny feno. Hendry, ny EVRYjourney dia bisikileta tsara ho an'ny dia an-tongotra. Izy io dia hybrid hybrid sy mpandehandeha amoron-dranomasina miaraka amina geometry milamina sy milamina izay mametraka ny vatanao amin'ny toerana mahitsy.
Ity bisikileta ity dia miaraka amin'ny vatana mandroso amin'ny alàlan'ny alim-pito misy kodiarana 1,95 mirefy malalaka sy semi-malama. Raha mitaingina bisikileta samihafa ny mitaingina bisikileta manomboka amin'ny hafainganana 1, hafainganam-pandeha 3, hafainganam-pandeha 7 ary hafainganana 21 hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha fa tsy haingana loatra na haingana loatra koa, fa miaraka amin'ny cadence mety hankafizanao mitaingina tsara.
Ny bisikileta EVRYjourney hybrid dia misy kodiarana semi-slick fotsy 26 x 2 inch. Izy io dia manana derailleur aoriana Shimano Tourney haingam-pandeha 7 sy Shimano Index Revo Shifter 7 hafainganam-pandeha. Mandritra izany fotoana izany dia miaraka amina freins disc eo aloha sy aoriana izy io ary koa valizy amina valizy sy fotaka.
Ny tombony azony dia: * Manana fitaovana marobe izy: safidy; * Manana fender izy mba hitazomana ny loto sy ny votra; ary * Azo ampiasaina amin'ny fivezivezena izy io, na izany aza, tsy mety amin'ny fampiasana lavitra be eny an-dàlana, koa raha mitady bisikileta mety tsara amin'ny fivezivezena isan'andro na mandeha an-tsokosoko ianao ary mahazaka lalana marokoroko vitsivitsy, dia ny enimpolo amby zato Ny e-bisikileta hybrid EVRYjourney dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra any. Ary izany rehetra izany ho an'ny bisikileta hybrid dimy tsara indrindra eny an-tsena. Jereo ny famaritana etsy ambany raha mila rohy mankany amin'ny fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny vokatra tsirairay.
Ary tadidio ny hametraka hevitra hampahafantatra anay. Izay aloha izao. Misaotra nijery! Raha nanampy anao tamin'ny lafiny rehetra izahay dia tsindrio ny bokotra 'Like' sy 'Subscribe'.
Mandrapihaona amin'ny lahatsoratra manaraka!
Tsara amin'ny olon-dehibe ve ny bisikileta 20?
roa-polo amby'bisikileta BMX kodiarana dia entin'ny ankizy aryolon-dehibeny habe rehetra fa ny taona farafahakeliny ho an'ity fomban'nybisikiletadia eo anelanelan'ny 7 sy 8 taona.
Salama daholo ary miarahaba antsika hiverina amin'ny tendron'ny talata iray hafa izay hiresahanay momba ny habe na frame bisikileta BMX hampiasaina amin'ny halavanao amin'ity lahatsoratra ity. Manana lahatsoratra iray hafa aho izay miresaka momba ny lafiny rehetra amin'ny géometry bikan'ny BMX. Ao amin'io fotsiny aho dia tsy manarona izay haben'ny endriny izay mety amin'ny haben'ny mpitaingina azy.
Izay no hifantohantsika anio miaraka amin'ny fifantohana amin'ny halavan'ny fantsona ambony, ilay lahatsoratra geometry hafa, mba hahitanao ny dikan'ireo tarehimarika hafa rehetra ary inona ny fiantraikany mety hitranga amin'ny fahatsapan'ny bisikiletanao, ianao izay miditra ao amin'ny BMX fotsiny na miverina aminy dia tonga, na olona te-hanana bisikileta vaovao na frame vaovao nefa tsy mbola mahalala izay habe tiany na izay habe tokony ho azon'izy ireo mifandraika amin'ny halavany mifandraika amin'ny halavany amin'ilay fantsona ambony ka andao hanomboka amin'ny halavan'ny mpitaingin-tongotra efatra metatra enina santimetatra amin'ny halavany roa 18 metatra ary miakatra avy eo, fa avy eo ao amin'ilay lahatsoratra dia hosaroniko ny haavon'ny mpitaingina izay fohy kokoa sy kely kokoa amin'ny haben'ny bisikileta. Araho hatrany na atsipazo raha izao no tadiavinao dia andao atomboka amin'ny haavo mitaingina efatra ka hatramin'ny efatra metatra ary ny elanelana eto dia 18 ka hatramin'ny 20 sentimetatra eo amin'ny halavan'ny fantsona ambony ary mila miarahaba Kink aho amin'ny famoronana Ireo sary ireo taona maro lasa izay ary avy eo dia hitako izy ireo tato amin'ny BMX Union ary azoko ny hiresaka momba izany ka raha vaovao amin'ny BMX ianao ary eo amin'io haavo haavo io dia ity no refy sy haben'ny bisikileta tokony ho tadiavinao hampifanaraka anao amin'ny ankapobeny, avy eo dia mankany 1.20m ka hatramin'ny 1.50m izahay ary ny habeny dia misy halavan'ny tubes 19.5 'hatramin'ny 20.25' halavan'ny fantsona ambony, ka alohan'ny hiresahantsika ny bisikileta 18- Inch sy bisikileta 20 santimetatra dia miresaka momba ny 20 isika bisikileta santimetatra eto satria ny tadin'ny tubes ambony 19,5 santimetatra dia mety amin'ny bisikileta 20 santimetatra izay dimy metatra telo santimetatra ka hatramin'ny dimy metatra avy eo no mihetsika.
Eo no ahatongavanao amin'ny 20 santimetatra fisaka ho an'ny halavan'ny fantsom-panafody hatramin'ny 20.5 santimetatra ho an'ny halavan'ny fantsona ambony ary raha mitady bisikileta BMX vaovao ianao dia matetika no mahita ny géometry ny frame farafaharatsiny halavan'ny fantsona ambony eo tranokalan'ny mpanamboatra bisikileta Ny fividianana bisikileta BMX vaovao satria ny haben'ny fantsona ambony dia mety hitondra fahasamihafana lehibe ho anao rehefa mianatra mitaingina ianao, indrindra raha ampitahaina amin'ny zavatra fohy loatra sy kely loatra na zavatra lava loatra ary Lehibe loatra loatra ka tsy manana habe bisikileta mety dia manao izay hahamora kokoa ny asa, noho ny fandehanana manomboka amin'ny 1,5 tongotra enina ka hatramin'ny 1,70 tongotra sivy ny haben'ny fantsona ambony indrindra dia 20,5 ka hatramin'ny 20.75 miaraka amin'ny halavan'ny fantsona ambony 20,6 ka hatramin'ny 21 santimetatra, avy eo amin'ny 6 metatra miampy 20,75 ary maro hafa.
Miaraka amin'ity elanelam-potoana 5 11 ka hatramin'ny 6 metatra ity sy ny ambony, dia matetika aho no manome soso-kevitra toa ny halavan'ny fantsom-batana 21 metatra ambony, ary raha mitaingina azy ianao ary mahatsapa fa mila zavatra lava kokoa. Manoro hevitra anao aza aho handeha mihoatra an'izany, indrindra raha manana enina metatra roa telo efatra dimy dimy sy enina miampy mpivoy mpitaingin-tsoavaly toa an'io halavany io ianao na maninona no misy ny frame BMX lehibe kokoa noho ny 21. dia santimetatra ary rehefa manakaiky ny 2m ianao dia mety mendrika ny handinihana bisikileta 22 'na 24', izay misy kodiarana lehibe kokoa ary mazàna tsara kokoa amin'ny olona lava kokoa Ho an'ireo zazalahy kely dia manana halavany roa metatra roa santimetatra ka hatramin'ny telo metatra, avy eo ny halavan'ny fantsom-batana na ny haben'ny bisikileta. tolo-kevitra momba ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo sy sasany santimetatra ary avy eo manana elanelam-potoana telo ka hatramin'ny telo metatra fito santimetatra izahay ary fahazoan-dàlana 14 ka hatramin'ny 14,5,5 inch, avy eo dia mifindra any amin'ny faritra mahazatra an'ny BMX, toy ny ary orinasa maro kokoa no manomboka eto amin'ny famokarana bisikileta feno na bisikileta feno BMX manokana.
Manana ny elanelam-potoana manomboka amin'ny 2 metatra 11 ka hatramin'ny 3 metatra 10 santimetatra isika amin'ny velarana feno ary ny halavan'ny fantsom-batana eto dia 16 santimetatra fisaka hatramin'ny 16 sy sasany santimetatra, noho izany ao an-tsaina dia izay ihany no misy antsika mikasika ny filàna manarona ireo tolo-kevitra fa zavatra tiako ho azo antoka ny zavatra noresahiko teto ary antenaiko fa mbola ao ny ankamaroanareo satria arakaraky ny itondranao ny BMX no hahafantaranao bebe kokoa, dia vao mainka ianao hahalala bebe kokoa ny tetikao. hampivelatra ny fombanao sy hahalalanao izay tena tianao haleha ianao, hatrany amin'ny Dirt Street Park angamba tianao ny zava-drehetra, angamba tianao ny ampahany aminy, tsara daholo izany satria ny freestyle daholo, fa arakaraka ny itondranao azy no vao mainka ianao mianatra ianao, arakaraka ny ianaranao no hahafantarako azy manokana ary any no hahalalanao izay haben'ny fantsona ambony tianao sy izay lafiny hafa amin'ny geometry frame BMX tianao momba ny bisikiletinao satria samy manana ny fitaomana ananany izy ireo, fa kosa ianao vao voalohany Mianara mitaingina dia tsy misy akony firy izy ireo satria mianatra ny fototra fotsiny ianao, mianatra mifehy ny bisikileta. Ka ny tena zava-dehibe dia ny fananana bisikileta mifanaraka aminao amin'ny habeny. Manantena aho fa hanampy an'ity lahatsoratra ity, saingy misy zavatra hafa azonao alaina ho takalon'ny bisikiletanao na fanovana ny bisikiletanao izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahatsapan'ilay bisikileta fa ny fantsona ambony lava be misy tahony lava kokoa dia afaka maka tahaka, fa izay misy fiatraikany sy fiatraikany samy hafa amin'ny traikefa amin'ny mitaingina satria ny taho lava koa dia misy fiantraikany amin'ny familiana ny bisikiletanao lahatsoratra iray momba ny géometry ny fantsona BMX azonao jerena eto amin'ity zoron'ny efijery ity sy ny lafiny rehetra amin'izany dia ianaro fa fohy kokoa ny halavan'ny fantsom-batana ambony dia ampy mifanohitra amin'izany, ny fork malefaka iray dia hampiakatra ny elakelakelinao misy elatra lavitra kokoa, ny simulation an'ny fantsona ambony kokoa dia misy fiatraikany amin'ny familiana ary manana lahatsoratra momba ny geometry fork izay miresaka momba azy aho, ho hitanao eo an-joro eto ihany.
Samy hafa ny 'tena sarotra'. Ankehitriny rehefa fantatrao izany rehetra izany, dia azonao atao ny mankanesa amin'ny lahatsoratra géomètre frame ary jereo ny dikan'ireo fandrefesana rehetra ireo ary afaka mianatra bebe kokoa momba ny fampivelarana ny fomba fanoratanao ny BMX ianao ary mamantatra izay tianao sy izay mety aminao. Raha io voalaza io dia manantena aho fa efa nianaranao zavatra teto.
Manantena aho fa manampy anao izany, ampahafantaro ahy amin'ny hevitra raha manampy anao izy ary antenaina fa raha vaovao ianao eto na mbola tsy tsindrio ny bokotra 'Misoratra anarana' raha mbola eo ianao, mifankahita rahampitso raha hijery lahatsoratra hafa
Eny,bisikiletaafaka manampyvery tavy kibo, fa mila fotoana. Ny fanadihadiana vao haingana dia nampiseho tsy tapakabisikiletamety hanatsara ny ankapobenymatavyvery ary mampiroborobo lanja mahasalama. nyhampihenaankapobenykibofanatanjahan-tena aerôbika somary mahery, toy nybisikileta(na anatiny na ivelany), dia mahomby hampihenatavy kibo.
Harvard Medical School dia nitatitra olona 155 poundsafakamandoro kaloria 260 eo ho eo mitaingina fanatanjahan-tenabisikiletaho an'ny marina30 minitra. Olona 125 kilaovemandoro 210 kaloria amin'ny fanatanjahan-tena iray, raha olona 185 kilaovemandoro kaloria 311.27.04.2019
Manome baomba be anao ve ny bisikileta?
Bisikiletatsyomeo vodiny lehibe kokoa ianao, fa metymanome anaoendrika iray miendrika endrika kokoa noho ny tombony amin'ny fananganana kardio sy ny hozatra.Bisikiletamiasa ny tongotrao sy ny glute, indrindra rehefaianareomananika, fa izynotsy maharitra ela naOmeofanoherana ampy hanangananalehibehozatra.
Tsara ve ny bisikileta 20 minitra isan'andro?
nytsingerina isan'andromitaingina ny20 minitradia ampy hijanonanaara-pahasalamana. tapakabisikiletamanampy amin'ny fandoroana kaloria manodidina ny 1.000 isan-kerinandro, ary koabisikiletaamin'ny hafainganam-pandeha 12 mph dia hanampy anao handoro kaloria 563 isan'ora, hoy ny fikarohana. Ny tsy fahampian'ny fampihetseham-batana dia iray amin'ireo antony mampidi-doza indrindra amin'ny fahafatesana manerantany.12.08.2017
Fantatrao ve ny karazana bisikileta mety indrindra aminao?
Angamba fantatrao tsara izay karazana bisikileta an-dàlana mety indrindra aminao ary mieritreritra ianao fa hadalana io. Avy eo raiso ny quiz dia ampahafantaro anay raha marina izany (na diso mahatsiravina)!
Karazana bisikileta inona no tokony hovidiko amin'ny quizony?
Fotoana tokony hijanonana tsy hanontany tena intsony, ary manomboka mandray an'ity quiz ity, izay azo antoka fa hanondro anao amin'ny lalana marina! Angamba tokony hividy zavatra maro loko ianao, miaraka amin'ny harona hanampy anao hitondra ny entanao rehetra manodidina. Na mety mila zavatra avo lenta ianao, toy ny fampiofanana marathon Ity fitsapana ity dia tsy miankina amin'ny fandalinana siantifika na inona na inona.
Karazana bisikileta inona no tokony hovidiko amin'ny hazakazaka?
Angamba tokony hividy zavatra maro loko ianao, miaraka amin'ny harona hanampy anao hitondra ny entanao rehetra manodidina. Na mety mila zavatra avo lenta ianao, toy ny fampiofanana marathon Ity fitsapana ity dia tsy miankina amin'ny fandalinana siantifika na inona na inona. Natao ho an'ny fahafinaretana fotsiny izany fa aza dia atao ambanin-javatra ny valiny :)